किन देखिन्छ यौ/न सपना ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/किन देखिन्छ यौ/न सपना ?
सपना विभिन्न किसिमका (डरलाग्दो, साहसिक, रमाइलो तथा यौ/न सम्बन्धी) हुन्छन् । सामान्यतया प्रजनन प्रणालीले राम्ररी कार्य गर्न थालेपछि से/क्स हर्मोनले एकातिर यौ/न व्यग्रता तथा यौ/न तनाव बढाउँछ भने अर्कोतिर यस अवस्थामा वी/र्यको पनि उत्पादन हुन थाल्छ । अनि वी/र्यले स्वाभाविकरूपमा बाहिर निस्कने बाटो खोज्छ ।
यौ/न चाहना प्रबल हुन थालेपछि एक किसिमको यौ/न तनाव बढ्न थाल्छ । यसलाई शान्त पार्नु पनि स्वाभाविक कुरा नै हो । हस्त मैथुन वा यौ/न सम्पर्क बाट यस्तो अवसर मिल्न नसकेको स्थितिमा व्यक्तिले यौ/न–सपना देख्छ ।
अनि पुरुषको हकमा सपनामै वी/र्य स्खलन हुने र यौ/न चरमसुख प्राप्तिको स्थितिसम्म पुग्ने हुन्छ । महिलाले त्यस्तो सपना देखेको खण्डमा पनि यो/निश्राव हुने र चरमसुख प्राप्त गर्ने हुन्छ । यौ/न तनावलाई शान्त पार्न गरिएको प्रयास वा क्रियाकलाप पर्याप्त नहुन पनि सक्छ ।
यौ/न तनाव शान्त पार्ने अर्को उपाय नभएको वा नगरिएको स्थितिमा त्यसलाई कम गर्न प्रकृतिले नै दिएको यो यौ/न–सपना एक स्वाभाविक कुरा हो । अर्कोतिर यौ”न सम्पर्क वा हस्त मै/थुन सामान्यरूपमा राखिँदा यो केही कम भए पनि निर्मूल नै नहुन सक्छ ।
केहीमा पर्याप्त र नियमितरूपमा हस्त मै/थुन वा यौ/न सम्पर्क गरिएकै अवस्थामा पनि यौ/न–सपना निरन्तर देखिने गरेको पाइन्छ । अनुसन्धानहरूले यौ/न–सपनालाई ‘टेस्टेस्टेरोन’ नामक हर्मोनको शरीरमा हुने मात्रासँग यौन–सपना देख्ने वा नदेख्ने कुरालाई जोडेका छन् ।यौ/न–सपना देख्ने व्यक्तिमा ‘टेस्टेस्टेरोन’ को मात्रा बढी हुने देखिएको छ ।
यौ/नको दृष्टिकोणले स्वस्थ व्यक्तिमा यो हर्मोन हुन्छ नै तर पनि कुनै व्यक्तिले यौ/न–सपना नै नदेख्न पनि सक्छ । यौ/न–सपना देखेर निद्रामै यौ/न चरमसुख पाउनु अनि यौ/न–सपना नै नदेख्नु दुवै प्राकृतिक कुरा हो ।
५ वर्षको प्रेमपछि यी दिदीबहिनीले गरे बिहे, भन्छन् ‘अब सधै सँगै बस्छौं’
घरबाट आजै हटाउनुहोस् यी ६ चिज, जसले निम्त्याउछ गरिबी र दुख